Ogaden News Agency (ONA) – Turkiga oo Safaarad Ka Furanaya Bariga Magaalada Qudus.
Turkiga oo Safaarad Ka Furanaya Bariga Magaalada Qudus.
Posted by ONA Admin	/ December 18, 2017
Madaxwaynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Axadii shalay ahayd sheegay in Dowladiisu ay rajeyneyso in ay safaarad ka furato caasimada Falastiin ee Bariga Qusus, mustaqbalka.
Wuxuu sheegay in Bariga Qudus ay hadda haysato Israel sidaasi daraadeedna aysan ka furan karin wax safaarad ah, balse ay rajaynayaan in ay soo dhawaatay maalmihii ay sida rasmiga ah u furan lahaayeen safaaradooda Falastiin.
Hadalkan ayaa imanaya maalmo yar kadib markii uu Erdogan ku martigaliyay magaalada Istanbul shirka dalalka Islaamka, kaasoo looga soo horjeestay go’aankii uu madaxweyne Donald Trump Qudus ugu aqoonsaday caasmada Israel.
Bariga Qudus ayaa waxaa qabsatay Israel sanadki 1967, kadib dagaal ay la gashay dalalka Carabta. Turkigu wuxuu hadda qunsuliyad ku leeyahay magaalada Qudus, waxana uu xidhiidh diblamaasiyadeed buuxa la leeyahay Israel.